UQhagamshelo lweCrystal Air BnB - I-Airbnb
UQhagamshelo lweCrystal Air BnB
Emva kokuba uzinzile, wamkelekile ukuba usindwendwele eCrystal Connection kwaye ujonge iCanal Towne ngaphesheya kwesitrato.
ICrystal Connection iye yaba yindawo yokusingwa yeminerali kunye nemetaphysical yabaninzi kwaye ngoku kufutshane nomnyango yindawo epholileyo yokuhlala nathi ubusuku bonke.
Crystal Connection ilungile kumbindi wedolophu Wurtsboro NY, ilali encinane quaint ekudibaneni kweendlela rt 209 yaye 17.
Sinendlu epheleleyo efumanekayo ukuya kuthi ga kwi-7 yabantu (iqela lokuphuma, iindawo zokurhoxa). Indawo inikwe yonke into eneekristale kunye namatye anqabileyo, nakwiimbotyi zakho zekofu! Ikona yasekuseni ekhitshini inazo zonke izinto zakho eziluncedo kwiikofu kunye neeti oza kuzifuna ukuze usuku lwakho luhambe, nokuba yiti yokuphupha yangokuhlwa!
Kumnyango okufutshane kukho Ichaphaza eliBomvu ngokutya kwemifuno okumangalisayo kwesidlo sakusasa sasemini kunye nesidlo sangokuhlwa kanye ukusuka kunxweme olusentshona, ivaliwe ngoLwesibini. Ezantsi eSullivan st yiWurtsboro Diner yokutya okuphefumlelweyo kwamaGrike kwaseMelika kunye nesidlo sakusasa kunye nesidlo sasemini, ivaliwe ngoMvulo. Phezulu ekudibaneni kweendlela lusapho oluphekwe ngendlela eyiyo yokutyela yaseMexico. Ke kwikona yesiphambuka yintandokazi yexesha elide, kaDanny, indawo yokutyela yonke yaseMelika kunye nebha epheleleyo. Ngaphaya kwesitrato rt 209 yi Gatta Love it Pizza kunye Ming Moon Chinese.
Ngaphandle kwabo bonke ubuncwane bekristale, amava, ukufundwa, ukuphiliswa kunye nokufota kwe-aura emnyango olandelayo, kukho i-Bashakill yokubukela iintaka kunye ne-kayak, i-Bashakill Winery ivula ngeempelaveki ngexesha lasehlotyeni, kunye neendlela ezininzi zokuhamba kwiindawo ezikufutshane zeCatskills Sullivan County ukuze uhlolisise.
Silapha ecaleni kwevenkile yekristale ukuba unayo nayiphi na imibuzo, kwaye ke ndikufutshane emva kweeyure.
*Iintengiso ezikhethekileyo ziyafumaneka ngolwesiHlanu + ngeMigqibelo ebusuku ngexabiso eliqhelekileyo ngeCawe ebusuku nge-1/2 isaphulelo. Buza ngomyalezo.
*Iintengiso ezikhethekileyo ziyafumaneka ngolwesiHlanu + ngeM…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Wurtsboro